Deg deg dagaal mar kale dib uga qarxay dhuusamreb - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Deg deg dagaal mar kale dib uga qarxay dhuusamreb
Deg deg dagaal mar kale dib uga qarxay dhuusamreb
Dagaal xooggan ayaa hadda dib uga qarxay magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada Galmudug, ka dib dil toogasho ah oo ka dhacay Xarunta wasaaradda biyaha iyo Tamarta oo aan sidaas uga dheeray xarunta Inji ee ay ku sugan yihiin Madaxda Ahlusunna.
Dagaalka hadda bilowday ayaa ah mid ka xooggan dagaalkii xalay ka dhacay Magaaladaasi.
Iska hor imaadka ayaa daba socda dagaal xalay ka dhacay iska goobta lagu dagaalamay, kadib markii ay israsaaseeyeen Ciidamo ka kala tirsan Booliiska Dowladda iyo kuwa Ahlu sunna, inta la xaqiijiyay dagaalkaas waxaa ku dhintay Askari katirsan Ciidamada Haramcad sida Ilo wareedyo sheegeen.
Magaaalada dhuusamreb hda waxaa laga msqlaya dhawaqa rasaas culus waxaana dagaalka uu u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan Ahlusunna iyo dowlada Somalia
Sh shaakir oo saaka saxaafada la hadlay ayaa sheegay in xalay ciidanka dowlada ay sooeweerareen xarunta inji oo ay dagan yihiin hogaanka sare ee Ahlusunna
La soco wixii warar ah oo ku soo kordhay Dagaalka Dhuusamareeb. Live:- Hobyomedia.com
Previous articleKhasaaraha dhimasho & Dhaawac ka dhashtay Maleeshiyo beleedyo weerar ku qaday gobolka Mudug
Next articleWararkii ugu danbeeyay ee dhuusamareeb